Noocyo kala duwan oo ah basbaas xagga xaafadaha | February 2020
Ugu Weyn Ee Noocyo kala duwan oo ah basbaas xagga xaafadaha
Noocyada basbaaska ee gobolka Moscow: sharraxaad, talooyin ku saabsan daryeelka iyo beeritaanka
Pepper waa khudradda oo ay ku jiraan waxyaabo badan oo fiitamiino waxtar leh. Waxaa la cunay ceeriin, ku daray saladh kala duwan, seeray, fuud, dubay iyo cufan. Dhaqankan waxaa ku jira macdano sida iodine, magnesium, potassium iyo macdano kale oo faa'iido u leh jirka bini'aadamka. Sababta qaar, basbaas macaan ayaa la yiraahdaa Bulgaariya, laakiin hadaladani maahan run, taniyo Bartamaha Ameerika waxaa loo tixgeliyaa meesha uu ku dhashay.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Noocyo kala duwan oo ah basbaas xagga xaafadaha 2020